नेपालकै माईलो भक्तपुर अस्पताल, कस्तो थियो पहिले कस्तो भो अहिले ?(फोटो फिचर सहित) | Sindhu Jwala
भक्तपुर अस्पतालकी मेडिकल सुपरीटेन्डेट सुमित्रा गौतमलाई एकबर्ष अगाडी न त मनमा चैन थियो न रातमा निन्द्रा नै । उनलाई बागमति प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले भक्तपुर अस्पताल जान भनेको थिए । सिन्धुली अस्पतालमै आफ्नो कार्यक्षेत्र रोजेकी सुमित्राले त्याँही थमौति गर्न मन्त्री दुलाललाई अनुरोध समेत नगरेकी होइनन् । तर मन्त्री दुलालले भक्तपुरै जान सुझाएपछि उनी भक्तपुर अस्पताल हाजिर भईन । त्यसबेला भक्तपुर अस्पतालको अवस्था निकै नाजुक थियो । दुईवर्ष अघि गठन भएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष मिलन सुवाल थिए । सुमित्रा पुग्नुभन्दा अगाडि प्रशासन प्रमुखमा राजेन्द्र नेपाल पुगिसकेका थिए ।
२०७६ असारको ४ गते हाजिर भएका थिए नेपाल । उनी आउँदा डा सुधा देवकोटा प्रमुख थिईन । त्यतिबेला पुराना कर्मचारीले समेत कुनै सेवा सुविधा पाएका थिएनन् । संघीय व्यवस्था पछि त्याहाँ रहेको विकास समिति समेत खारेज भयो । राजेन्द्र आउँदा अस्पतालको ओपिडी सेवा नै बन्द भएर कर्मचारीको आन्दोलन चलिरहेको थियो । व्यवस्था पन समितिका अध्यक्ष मिलन पनि आजित भईसकेका थिए । सुधा देवकोटा लगाएतको प्रयासमा मिलाउन थालिए पनि अर्को विरोधी ग्रुपले अख्तियारमा समेत मुद्दा हालेको थियो । त्यो अवस्था हुँदा हुँदै सुधा समायोजनमा गएपछि प्रमुख खाली रहन गयो । गत मंसिरमा सुमित्रा भक्तपुर अस्पतालमा हाजिर भईन । कार्यलय प्रमुख विहिन रहेको अस्पतालमा पुषदेखि सुमित्राले प्रमुखको जिम्मेवारी पाईन । कर्मचारीको सेवासुविधाको लागि नियमावली बनेर स्विकृत नभएपनि हुने प्रक्रियामा पुगेपछि आन्दोलन मथ्थर भई अन्य कर्मचारीले समेत उनलाई साथ दिए ।
उसोत मन्त्री दुलाललाई समेत त्याहाँको चिन्ता थियो । आफुले सरुवा गरि पठाईएकी प्रमुखद्वारा सेवा प्रवाह उपलब्धीमुलक बन्छकी बन्दैन भन्ने थियो । त्यहि भएर उनी भक्तपुर अस्पतालको छड्के अनुगमनमा निस्कन्थे । मन्त्री दुलालले नियममित अनुगमन संगै त्याहाँको पूर्वाधार तथा अस्पतालको स्तर उन्नीमा मन्त्रालय मार्फत आवश्यक सहयोग गरे । त्यसपछि विस्तारै अस्पतालको अवस्था सुध्रिन सक्यो । व्यवस्थापन समिति, कर्मचारी र आफ्नो निरन्तर प्रयास पछि अस्पताल सुधारिएपछि सुमित्रा दंग छिन् ।
उसो त यसबर्ष भक्तपुर अस्पताल बागमति प्रदेशको ८ वटा मध्ये उत्कृष्ट हुन सफल भएपछि सुमित्रा मात्रै होईन अस्पतालका व्यवस्थापन समिति तथा कर्मचारी खुशीले गदगद छन् । अनि त्याहाँ सेवा लिने सर्वसाधारण आश्चार्यमा छन् । हिजो त्याहाँ गएका विरामीहरुलाई अन्य अस्पतालहरुमा रिफर मात्रै गर्ने अस्पताल आज कसरी परिवर्तन भयो ? सबै दंग संगै खुशी छन् । अस्पतलाले बिरामीलाई दिईने एक वर्ष अघिको सेवा र अहिलेको सेवा आकाश जमिनको फरक परेको स्थानीय शुकुराम खाईतुले बताए । ‘पहिलेको भन्दा अस्पताल अहिले निकै परिवर्तन भएको छ’, ७२ वर्षीय शुकुरामले सिन्धुज्वालासंग भने । चन्द्रशमशेरद्धारा स्थापित भक्तपुर अस्पतालमा ११६ वर्षपछि बल्ल आईसियू सेवामा परिणत हुनु मन्त्री दुलालको देन रहेको प्रदेश सांसद डा. राजेन्द्र मान श्रेष्ठको भनाई छ । प्रदेश सरकाले जनताको कोभिड उपचार निशुल्क गरिने आश्वासनले बल्ल संघीय सरकारकारको अनुभूति मिलेको उनले सुनाए ।
भक्तपुर अस्पतालले जनताको मन जित्न सक्नुमा बगमति सरकार तथा मन्त्री दुलालको अथक प्रयास भएको भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिको तर्क छ । पछिल्लो समय सबै कर्मचारी व्यवस्थापन समिति सबैको पहल ले उपलब्धि मुलक भएको उनले बताए । ‘मन्त्री दुलाल जे बोल्नु हुन्छ त्यहि गर्नु हुन्छ, उहाँको स्प्रिट संग हामी सबै सहमत भएको कारणले सफलता हाँसिल मिलेको हो’, जिल्ला समन्वय प्रमुख नवराज गेलालले भने । ११६ बर्ष पछि आईसियु सहितको ल्याब पाएपछि आफु मात्रै होईन सिंगो भक्तपुरबासी खुशी भएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मिलन सुवाल बताउँछन् ।
अस्पतालको अभिलेखमा उल्लेख गरिएअनुसार नेपालको पहिलो र जेठो अस्पताल वीर अस्पताल हो । बि.सं. १९४७ साउनमा तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले स्थापना गरेकाले यो अस्पतालको नाम वीर अस्पताल रहन गएको हो । त्यसको ठिक १४ वर्षपछि तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले भक्तपुरमा बि.सं. १९६१ असार १७ गते १५ शय्याको ‘चन्द्रलोक डिस्पेन्सरी’ को नामबाट स्थापना गरेको अस्पताल हो ‘भक्तपुर अस्पताल ।’ नेपालको जेठो वीर अस्पताल पछिको दोश्रो अस्पताल भक्तपुर अस्पताल हो । देशकै दोश्रो जेठो अस्पताल भएपनि हरेक सरकारबाट उपेक्षित बन्दै आएको भक्तपुरका स्थानीयको गुनासो छ । चन्द्र शमसेरले यो जिल्लाका साथै काभ्रेको बासिन्दालाई पनि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उदेश्यले स्थापना गराएको यो अस्पताल २०२८ मा ५० शय्याको जिल्लास्तरीय अस्पतालको रुपमा सेवा विस्तार गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुवाल बताउँछन् । उनका अनुसार २०३० मा बनेको भवनमा हाल सञ्चालन भइरहेको अस्पतालमा २०५८ जेठमा अमेरिकी सैनिक सहयोगमा आकस्मिक कक्षको निर्माण भएको थियो । त्यस्तै २०६१ मा भदौमा २५ शय्याको प्रशुति गृह थप गरी ७५ शय्यामा विस्तार निर्माण गरेको थियो ।
भक्तपुर अस्पतालको जग्गा भित्र अहिले तीन वटा अस्पताल सञ्चालनमा छन् । भक्तपुर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र छन् । ‘चन्द्रलोक डिस्पेन्सरी’ को ऐतिहासिक भवनबाटै सुरु भएको भक्तपुृर क्यान्सर अस्पताल अहिले पनि क्यान्सरले भोगचलन गर्दै आएको छ । सरकारले भक्तपुर अस्पतालको लागि १०० शय्यामा बिस्तार गर्ने भन्दै बनाएको नयाँ अन्तरंग भवनमा राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द सञ्चालनमा छ । अहिले यहाँका तीन वटै अस्पताललाई भवन निकै अभाव छ ।
अस्पताल कै जग्गामा नेपाल रेडक्रस सोसाईटी भक्तपुर शाखाको भवन छ भने अस्पतालको कम्पाउण्ड भित्रको जग्गामा भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो जग्गा भन्दै निजी रुपमा पर्यटकीय शौचालय बनाएको छ । अलिकति खाली भएको जग्गामा अहिले कोभिड–१९ का विरामी र आईसियू वार्ड निर्माण गरिएको छ ।
अस्पतालमा आईसियू सञ्चालन गर्न ल्याएका भेण्टिलेटर सहितको सामाग्री थन्किएको ५ वर्षपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयको पहल र सक्रियता बल्ल प्रयोगमा आएको सुवाल बताउँछन् । उसोत मन्त्री दुलालले क्यान्सर अस्पतलाई समेत भक्तपुर अस्पतालकै मातहातमा ल्याउने अन्तिम प्रयास रहेको बताएका थिए ।
भक्तपुर अस्पतालमा मेडिकल सुपरिटेण्डेन्टमा रहेकी डा. सुमित्राले वर्षौदेखि प्रयोगमा नआएका आईसियूका भेण्टिलेटर सहितका सामानहरुको प्रयोग गर्दै अस्पताललाई नयाँ मोडमा पु¥याएकी थिईन । ‘अस्पताललाई अझै धेरै गर्ने योजना थियो कोभिडका कारण भनिएजति काम गर्न सकिएन’, सुमित्राले सुनाईन । उतिबेला आफुलाई मन्त्रीले भक्तपुर हुत्याईदिएको अनुभूत गरेकी सुमित्रालाई अहिले भने अवसर मिलेको भान हुन थालेको छ । त्यसै उनले मन्त्री दुलाललाई गहन जिम्मेवारी सुम्पने एक असल अविभावको रुपमा बुझेकी होईनन् । अझै उनी नेतृत्वको भक्तपुर अस्पतालमा चुनौति ज्यादा छ तर पनि उनले हिम्मत भनेको हारेकी छैनन् ।
दरिलो आत्मविश्वासका साथ दिनरात होमिएकी छिन् सुमित्रा । उनलाई व्यवस्थापन समिति र कर्मचारीको उतिकै सहयोग छ । प्रशासनलाई समेत चुस्त दुरुस्त बनाउन प्रशासन प्रमुख राजेन्द्र नेपाल खटिएका छन् । उनको दक्ष क्षमता र कार्यकुशलता सुमित्रालाई काफी छ । अस्पतालको सेवासुविधामा आन्तरिक प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका हुने प्रशासन प्रमुख नेपाल बताउँछन् । भक्तपुर अस्पताललाई यहाँका विरामी मात्रै नभई काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोकदेखि पूर्वका जिल्लाका अधिकांश विरामीको अस्पतालको रुपमा विकास गर्न आफूले पहल गरिने सुमित्राको धोको छ । प्रदेश सरकारले कोरोना अस्पतालको रुपमा तोकेपछि भक्तपुर अस्पतालले अहिले पाँचवटा भेन्टिलेटरसहित ६ शय्याको आईसियू र कोभिड ल्याब तथा प्रयोगशाला समेत सुरुवात गरेको छ । जसले पुरानाे अस्पतालकाे रूप मात्रै हाेईन गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिएकाे स्थानीयकाे भनाई छ ।
This entry was posted in फोटो फिचर, फिचर न्युज, समाचार, विशेष, जीवनशैली / स्वास्थ्य. Bookmark the permalink.
इन्द्रावती ८ मा नेकपाको विजयी हुने सुनिश्चित, १०७५ मत गन्दा ६४२ सूर्य र ४०२ रुख
घुम्थाङमा वर्थिङ सेन्टर भवनको शिल्यान्यास
चौतारा ,सिपाघाट ,कात्तिके,काठमाडौं सडक झ्याडि देउराली खण्डको स्तरोन्नी कार्य शुरू
वडा स्तरीय भलिबलको उपाधी वडा नम्बर ४ कुबिण्डेलाई
वडाअध्यक्ष नै गैरसरकारी संस्थाको जागिरे